IOS 15 inotaura kuenda kumakadhi ekupera uye ezviitiko muWallet | IPhone nhau
iOS 15 inotaura zvakanaka kumakadhi ekufambisa uye emakadhi akapera muWallet
Ngirozi Gonzalez | | iOS 15
Muzana ramakore reXXI, uine zvese makadhi emakadhi, kukwira, matikiti emuvhi, matikiti ekongiresi, nezvimwe. rava nzvimbo yakajairika. Kuvimbisa kurongeka mune zvese izvo arsenal yeruzivo, Apple yakagadzira iyo app chikwama makore akati wandei apfuura nechinangwa che chengetedza makadhi ese uye kupfuura munzvimbo imwechete yakakosha kumushandisi. Asi semamwe maapplication paIOS, haina kuongororwa pamusoro pemakore. Nekudaro, nekuuya kweIOS 15 Apple yakagadzirisa rimwe rematambudziko makuru aive muapp iyi: kumberi kuratidzwa kwemakadhi ekare echiitiko. iOS 15 inobvumira kuti ivanzwe otomatiki.
Wallet ichavanza nzendo yekufamba uye chiitiko chinopfuura pane iOS 15 otomatiki
NeWallet unogona kuwana kiredhiti, madhibhiti uye makadhi akabhadharwa, nhengo uye akavimbika makadhi, boarding kupfuura, matikiti, coupon, makadhi evadzidzi, nezvimwe munzvimbo imwechete.
Chikwama chaishandiswa kuchengetedza mapasipoti ekubhodhidza, matikiti uye mamwe marudzi ezviratidzo zvekuwana Zvisinei, mazhinji emakadhi iwayo vakapera nekuti chiitiko ichi chakaitika kana nekuti takanga tatozvishandisa. Kuti ivo vanyangarika kubva kuapp, zvaidikanwa kuti vadzime imwe panguva uye dzimwe nguva raive basa rinogumbura.
Kuuya kweIOS 15 kwagumisa dambudziko iri nekuwedzera sarudzo: 'Viga makadhi akapera'. Ndokunge, nekumisikidza iyi sarudzo sezviitiko zvinoitika uye makadhi anopera, anenge asisiri kuoneka pachiratidziri cheWallet. Hongu zvirokwazvo, hazvibviswe zvachose, kusiya zvese zvakapfuura zvakapfuura munzvimbo yeapp kuti uzvichengete sezviyeuchidzo.
Maererano ne vatadzi, iyo iOS 15 kodhi inoratidza pane imwezve sarudzo kunyangwe ichigere kuburitswa. Iyi sarudzo yaizobvumira bvisa akawanda apfuura kamwechete. Ndokunge, tinogona kubvisa zvachose makadhi akati wandei pane kuenda rimwe nerimwe sezvatinoita nhasi neIOS 14. Tichaona kana mabasa aya akazounzwa kumagumo vhezheni uye nemhedzisiro yavanayo pakushandisa kweapp mumushandisi uyo shandisa zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 15 » iOS 15 inotaura zvakanaka kumakadhi ekufambisa uye emakadhi akapera muWallet
Apple Music uye nehungwaru mukutarisana neshanduko mumimhanzi mvumo